Mombamomba ny orinasa-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valizy no marika)
Home>Momba anay>Piraofilin'ny orinasa
Titan Valve dia niorina tamin'ny taona 80 tany ho any ary nekena ho marika malaza eo amin'ny tsenan'ny valizy iraisam-pirenena. Titan valizy dia manolo-tena hanome vahaolana ara-teknika sy valves avo lenta ho an'ny mpanjifanay.
Amin'ny maha-mpitarika manerantany amin'ny indostrian'ny valizy, ny Titan Valve dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy fanamboarana valva indostrialy hahazoana ny vokatra farany kalitao. Ny vokatra vokarinay dia ahitana Ball Valve, Gate Valve, Globe Valve, Check Valve, Strainer amin'ny fitaovana isan-karazany. Titan Valves dia noforonina ary namboarina tamin'ny fanajana henjana ny fenitra iraisam-pirenena toy ny API, ANSI, ASME, DIN, BS, NACE ary JIS.
Ny mpiasan'i Titan Valve tena mahay sy za-draharaha dia manolotra ny mpanjifanay vahaolana farany manavao ny valin'ny valiny samihafa mandritra izany fotoana izany manome vidiny mifaninana sy fandefasana ara-potoana.
Titan Valves dia be mpampiasa amin'ny Onshore Production, Petrochemical, Oil and Gas, Power Station, Marine, Sakafo sy zava-pisotro, fitsaboana rano, harena ankibon'ny tany, pulp ary taratasy.
Ny tamba-jotra sy mpaninjara eran-tany dia ahafahan'ny Titan Valve hiara-hiasa akaiky amin'ireo mpanjifanay ary hanafohezana ny fizotran'ny fomba fiasa ary manolotra tolo-kevitra noforonina manokana sy hitazonana fifandraisana misy finiavana. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tanjonay farany miaraka amin'ny valizy mivaingana sy serivisy tsara indrindra.